Ị pụrụ ịbụ iji ụfọdụ akacha mara mobile nchọgharị weebụ ruo ugbu a. Ebe a bụ ole na ole ndị ọzọ dị mma-enriched na i nwere ike iji ha na gị na Android ma ọ bụ iOS ngwaọrụ dị ka kwa gị nhọrọ.
N'elu ndepụta a, na ụfọdụ pụrụ iche atụmatụ ike na ya, na-anụ ụtọ kpakpando fim nke 4.6 nke 5 na Google Play Store, dolphin dị maka ma android na iOS nyiwe. A ole na ole ọkaibe atụmatụ na a nchọgharị weebụ-enye bụ olu dabeere search-akpọ ngwá ọrụ Sonar, Ogbugbu na-agba mbọ na ibe edokọbara navigation na-enyere gị aka ịbịaru akwụkwọ ozi na ihuenyo aka ịchọta ndị bookmarked saịtị, wdg
Na mgbakwunye na n'elu atụle atụmatụ, ọtụtụ ndị ọzọ nwere ike nyeere site na nbudata free tinye-ons na dị online maka nchọgharị.
Ejikarị iwu nwere ike gburu site mmegharị.
Na-enye ohere ịzọpụta akụkọ ihe mere eme ma ọ bụ cache ka SD kaadị.
The YouTube download mma a na-tutu amama.
Na otu oru oma flash mwekota na ịdị kpakpando fim nke 4.5 nke 5 na ma ndị nyiwe, Maxthon dị maka Android na iOS ngwaọrụ. The Split-ihuenyo atụmatụ na a nchọgharị nwere-enye gị ohere na-arụ ọrụ n'adabereghị na abụọ dị iche iche windows (ekpe na nri), si otú azọpụta oge gị.
Maxthon nwere Wepu atụmatụ na-enye gị ohere reopen taabụ na-accidently emechi, na meghere taabụ bụ akpaaka-azọpụta na ike ga-maliteghachiri bụrụ na nke usoro ma ọ bụ ngwa okuku.
Na-enye ohere mmekọrịta n'etiti mobile na PC nsụgharị.
Nwere kasị mma flash mwekota.
Adịghị akwado olu-iwu.
Kpomkwem haziri ma mepụtara maka iPhones na iPads, Opera Coast bụ ahụkarị Apple na-agba mbọ nchọgharị weebụ na kpakpando fim nke mkpokọta 4.5 nke 5. N'ihi na anọghị nke azụ na-atụ button, Opera Coast awade swipe (ekpe ma ọ bụ aka nri) ịkpali azụ na-apụta na ibe weebụ, si otú azọpụta a dị ịrịba ama ego nke ọrụ 'oge.
The smart akpaaka-hide adreesị mmanya na naanị Home button anya na-enyere ndabara na-ihuenyo echiche nke ọdịnaya na mobile ihuenyo. Ịnọgide na-enwe omenala Speed ​​Ịkpọ oku atụmatụ ya nna nna, Opera Coast na-enye ohere ka ị gaa na weebụ ọkacha mmasị gị na saịtị na otu taabụ, n'ihi ya na-enye gị a enweghị ntụpọ ọgwụgwụ-ọrụ ahụmahụ.
Na-enye ohere zuru-ihuenyo echiche ruru wepụrụ navigation ma ọ bụ ndị ọzọ na ngwaọrụ.
Ofụri Esịt ogbugbu na-agba mbọ igodo.
Dị naanị maka iOS ngwaọrụ.
Mgbe ụfọdụ a peeji ole na ole nwere ike ina sụgharịrị ọhụma.
• 4. UC Nchọgharị Obere
A na-ewu ewu nchọgharị mara maka ya ìhè arọ na-anụ ụtọ kpakpando fim nke 4.4 nke 5 na Google Play Store. UC Nchọgharị Obere bụ ike nke itinye web peeji nke na ndị ọzọ na ọdịnaya buturu ngwa ngwa. Na ike akpaaka-reconnect ka download isi iyi saịtị, UC Nchọgharị Obere enye gị ohere download multiple ọdịnaya n'out oge na ndabere.
Ụfọdụ ndị ọzọ dị ịrịba ama atụmatụ na UC Nchọgharị Obere rịọ na-agụnye, Night Mode na-enyere gị ele na ihuenyo ọdịnaya na ala n'abalị, ogbugbu na-agba mbọ video ọganihu na olu akara, wdg
Na-enye ohere ngwa ngwa nbudata nke ọdịnaya na Ịntanetị.
Ụfọdụ ọrụ-aka lagging mgbe ụfọdụ.
A kọmpat version nke Opera mobile nchọgharị weebụ na akwụ kpakpando fim nke 4.3 nke 5 maka Android n'elu ikpo okwu ma naanị 3 nke 5 maka iOS n'elu ikpo okwu na enriched na ọ fọrọ nke nta niile atụmatụ nke ya okenye nwanne, ie Opera. N'ihi na nke kọmpat imewe na Opera Mini nwere, ndị niile ọdịnaya-na-egosipụta na ihuenyo na-abịakọrọ ya, si otú a mee nchọgharị fechaa na-eme ka ọ mara buturu ngwa ngwa.
Na ike download njikwa, Opera Mini-eme ka ọ mfe n'ihi na ị ibudata ọkacha mmasị gị ọdịnaya mfe na ngwa ngwa, n'ihi ya na-eme ha maka na ị ọbụna mgbe ị na-anọghị n'ịntanetị. Uru:
Nwere ike na-agba ọsọ na Mobile ekwentị mkpanaaka na ala nkọwa.
Easy ka ibubaa ma ọ bụ mkpu mgbe ị na-elele peeji nke.
Page sessions ekubi ume (oge-esi) Kama mee elu mee ma ọ bụrụ na nhazi na-ewe kwa ogologo.
Mepụtara kpọmkwem maka Android n'elu ikpo okwu mgbe ịkpata oké ekele site PC ọrụ, Opera nwere 4.3 nke 5 kpakpando fim site mobile ọrụ na Google Play Store. Na Speed ​​Ịkpọ oku mma, Opera-enye gị ohere sọfụ ọkacha mmasị gị weebụsaịtị na otu mgbata, na-enweghị na iji kọmputa ede zuru URL ma ọ bụ ịchọta ndị bookmarked njikọ.
Otu n'ime ndị isi atụmatụ na Opera awade bụ nkwanye media mkpakọ na e mere site na ya sava tupu ọdịnaya dị maka na ị na gị mobile ihuenyo, n'ihi ya azọpụta a ezigbo ego nke Internet bandwit nke bụ na-enye aka karịsịa mgbe i ejedebeghị data atụmatụ.
Na-enye ohere ngwa ngwa nchọgharị na navigation ọsọ.
Nche na nhọrọ dika Nne na Nna Control na-efu.
Ọzọ nke ndị kasị ewu ewu na ọtụtụ ebe ada nchọgharị weebụ maka mobile ọrụ. Maara nke ọma n'ihi na ya gigantic nso nke nkwụnye ins na-anụ ụtọ fim nke 4.3 nke 5 kpakpando gam akporo ọrụ, Firefox maka Android awade ọtụtụ ọkaibe atụmatụ dị ka paswọọdụ njikwa, ad blocker, wdg
Tụkwasị na nke a, mgbe eji na Firefox akaụntụ, Firefox mmekọrịta-enye gị ohere iji mekọrịta gị Firefox on PC na mobile version iji na-enye gị enweghị nkebi ọrụ ahụmahụ n'agbanyeghị nke ngwaọrụ ịchọrọ ị na-arụ ọrụ.
Nwere ezigbo nzuzo na nche atụmatụ.
Ọ wuru na-PDF nkiri.
Nwere mwekota nke mmadụ netwọk.
Adịghị ekwe ka mmekọrịta na Apple mobile ngwaọrụ.
Chrome bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu na ọtụtụ ebe ada nchọgharị weebụ ma PC na mobile ngwaọrụ. N'agbanyeghị nke ịbụ otu n'ime ndị isi rivals nke Apple, Google ẹkenam Chrome maka iOS ngwaọrụ dị ka mma. Ebe Chrome-arụ kpakpando fim nke 4.2 nke 5 site Android ọrụ, ọ bụghị na a na kechioma maka Apple ngwaọrụ na akwụ naanị 3 kpakpando e nwere.
Ihe mere ihe ịga nke ọma na Chrome-arụ bụ nke ya na onye ọrụ-enyi na enyi interface tinyere ikike ka mmekọrịta taabụ na ya mobile version na atụ arụnyere na PC. Tụkwasị na nke a, Chrome maka mobiles-enye gị ohere ka rịọ desktọọpụ version nke weebụsaịtị, kwesịrị ọrụ nwere nsogbu na ịnweta saịtị 'mobile version.
Na-enye ohere olu dabeere searches.
Ọ wuru na-Flash Player.
Ọ bụghị oru oma nzuzo atụmatụ dị.
Ụfọdụ saịtị pụrụ ịbụ ekwekọghị na nchọgharị.
• 9. Hover Nchọgharị
Hover Nchọgharị na 4.1 nke 5 kpakpando fim na Google Play Store bụ maka gam akporo ọrụ. Nchọgharị nwere a pụrụ iche mma na-eme ka na-achọgharị ibe weebụ iji mara na ndabere, otú ikwe gị ịnọgide na gị ugbu a ọrụ. Ị na-amara gị ọkwa banyere ihe ịga nke ọma loading nke ibe weebụ site na ozi chat isi otú i nwere ike ịgbanwee gaa na peeji ma malite nchọgharị.
Nchọgharị nwekwara multi-window nkwado na-enye gị sọfụ site n'aka ihe karịrị otu ibe weebụ n'out oge, si otú expediting gị nchọgharị ahụmahụ na-azọpụta gị oge bara uru.
Na-enye ohere ndabere peeji loading.
Na-akwado multi-window Farisii.
Ọ bụghị dị ka ire ụtọ dị ka ya ndị ọzọ na asọmpi.
A wuru na-nchọgharị na Apple ngwaọrụ eliminates mkpa nke inwe ihe ọ bụla ọzọ nchọgharị weebụ maka Internet Farisii on iOS igwe na mbadamba. Na-anụ ụtọ kpakpando fim nke 4 nke 5 site ya ọrụ, Safari agụnye atụmatụ dị ka paswọọdụ ọgbọ, nne na nna akara, onwe nchọgharị, wdg
Na akpaaka-hide atụmatụ ike na omnibar-imezi adreesị mmanya na ochie azụ na-atụ buttons dochie swipe-chụpụrụ navigation njikwa, ọ na-aghọ mfe ele ọdịnaya nke ibe weebụ n'ụzọ doro anya na surf saịtị ndị ọzọ na ala mgbe mkpa.
Nwere fọrọ nke nta niile chọrọ nche na nzuzo atụmatụ.
Na-enye ohere ngwa ngwa downloads.
Ihichapụ kuki bụ a aka ọrụ.
E wezụga n'elu tụlere mobile nchọgharị weebụ, e nwere ọtụtụ ndị ọzọ. Otú ọ dị n'elu ndepụta e dere ihe na ẹdụk ndị na-na ekele ọtụtụ n'ime ọrụ n'ụwa nile.
> Resource> iOS> 10 Fast Web nchọgharị maka Mobile (Android na iOS)